#GIS - ArcGIS Pro Course - laga bilaabo xoq - Geofumadas
Abriil, 2019 ArcGIS-ESRI, cadastre, Koorsooyinka AulaGEO, Baridda CAD / GIS
Baro ArcGIS Pro Easy - waa koorso loogu talagalay xiisaha GIS ee doonaya inay bartaan sida loo isticmaalo softiweerkan Esri, ama isticmaaleyaasha noocyadi hore ee rajada ka qaba inay aqoontooda ku cusboonaysiiyaan qaab wax ku ool ah. ArcGIS Pro waa nooca cusub ee barnaamijka GIS ee ganacsiga ugu caansan, kuna dhammaanaya ArcMap 10x.
Koorsadan waxaa loogu talagalay Golji Alvarez, oo ku saleysan habka AulaGEO:
Dhammaanba hal deegaan dhuleed,
Hawlaha ay sameeyeen khabiir, ayaa sharaxaad ka bixiyey,
Kooraska koorsadaada ku qaado, adoo helaya nolol,
Ikhtiyaarka ah inaad waydiiso su'aalaha markaad rabto,
Qalabka iyo macluumaadka la heli karo si loo soo dejiyo,
Helitaanka qalabka mobile,
Isbaanish iyo Ingiriisi.
Koorsadu waxay ka kooban tahay lix qaybood; Shanta ugu horreysa, waxaan kula shaqeyneynaa xogta heerka waddanka, barashada tallaabo tallaabo ah sida loogu sameeyo jaangooyooyin isku xog ah. Qeybta 6 waxaan ka shaqeyneynaa qaab labaad, iyo jimicsiyo waxaa lagu fuliyaa guryaha si tartiib tartiib ah, laga soo dejinta xogta laga soo qaado AutoCAD / Excel ilaa sameynta tibaaxaha isku dhafan iyo mawduucyada ku saleysan miisaska ku xiran dibadda
Helitaanka Koorsada Isbaanishka
Kusoo Bilowga Ingiriisiga
Hoos waxaa ku qoran nuxurka kooban ee kooraska.
Qaybta 1. Astaamaha ArcGIS Pro
Aynu bilowno ArcGIS Pro. Fasalkan, waxaa lagu soo bandhigay barnaamijka cusub ee barnaamijka, oo ay ku jiraan maareynta waxyaabaha ku jira qeybta bidix iyo buuga xogta ku qoran qeybta saxda ah. Waxaa lagu sameeyaa iyadoo la raacayo jimicsi iyadoo la adeegsanayo xogta laga helo garoomada diyaaradaha adduunka oo dhan, lagala tashanayo xogta iyaga ku saabsan lana isku dayayo in la barto xarigga sare iyo qalabka.
Xulashada xogta Fasalkan waxaad ku baraneysaa siyaabaha kala duwan ee loo xusho walxaha, labadaba xulashada kumbuyuutarka oo ku saleysan sifooyinka shaxda iyo duruufaha. Laga bilaabo hadda, dhammaan shaqooyinka waxaa lagu qabtaa hal dhul oo heer qaran ah.
Meelaynta Astaamaha. Halkan waxaa lagu qeexay inay tahay sameynta aagag xulasho deg deg ah, si aad awood ugu yeelatid hab wax ku ool ah. Layligani waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo adeegga sawir-gacmeedka satalaytka (sawirka adduunka) waxaana la baraa sida loo abuuro, loo rogo, loo weyneeyo, wax looga beddelo ama loo tirtiro aagga xiisaha (calaamadeynta).
Qaybta 2. Abuuritaanka iyo tafatirka xogta meelaha.
Ku dar xogta laga bilaabo Excel. Tan waxaa ku jira tallaabo-tallaabo, sida loo geliyo xogta duleed ee miiska isku-xidhka 'Excel'. Isuduwayaasha juqraafi ayaa loo adeegsadaa kiiskan; jimicsi dambe waxaad had iyo jeer gelin doontaa iskudhafyada 'Excel UTM'. Dabcan, tan iyo layliyo kale feylasha ayaa lagu daray si ay awood ugu yeeshaan inay fasalka ku celceliyaan.
Calaamadaha Xogta Fasalkan waxaa ka mid ah adeegsiga astaamaha mowduucyada ku saleysan shuruudaha miiska. Gobollada heer dal ayaa loo adeegsadaa tan, taas oo la mid ah jimicsigan oo dhan (Madagascar).
Editing data xogta. Halkan waxaad ka heleysaa dhulalka la midka ah ee la soo xulay sida hagaajinta xogta alphanumeric, isbaddalinta iyo ku darsashada tiirarka, iyo sidoo kale xisaabinta iyo kaydinta aagagga ku salaysan habka saadaasha ayaa lagu sharaxay.
Calaamadaynta sifooyinka. Hadda, waxaa lagu sharaxay sida loo keeno xogta miisaanka shayga oo looga dhigo inay u muuqdaan astaamo ahaan (sumado). Waxaa loo sharaxay sida loogu sameeyo geesinimo, xariiqyo iyo dhibco; iyo waliba dhinacyada laxidhiidha jihada calaamadda.
Tirinta macluumaadka juqraafi. Qalabka lagu hagaajinayo xogta xogta waxaa lagu sharaxay.
Sawirrada hirgelinta. Halkan, adigoo isticmaalaya qodobbo la yaqaan oo muuqaal ah, joqraafi ayaa loo sameeyaa iyada oo ku saleysan lakabka duleedka.
Qaybta 3. Falanqaynta xogta
Falanqaynta Saameynta - Qabsashada. Waxaa lagu sharaxay sida loo doorto xogta xaddidan, tanina waxay ku xidhan tahay geoprocessing ee saamaynta, dooro nooca isku dhafan, nooca dhammaadka.
Qaybta 4. Ku daabac waxyaabaha leh ArcGIS Pro
Soo saarista Khariidadaha. Waa tan sida loo dhiso sanduuq loogu talagalay daabacaadda, oo sharraxaya sida loogu daro waxyaabo khariiddada sida miisaanka garaafka, astaamaha astaamaha, astaamaha woqooyi, iwm. Waxay kaloo sharxaysaa sida loogu dhoofiyo khariidada qaabab kale (pdf, png, jpg, eps, iwm) si loogu daabaco ama loogu daawado barnaamijyada sida caadiga ah loo isticmaalo.
Qaybta 6. Aynu yeelno - tallaabo tallaabo tallaabo ah
Qeybtaan, qeybta labaad ee shaqada kayar, layliyo lagu dabaqo shaqooyin guud oo ku saabsan arimaha hantida ayaa la sameeyaa Waxay xasuustaan ​​aaggaas waxaan u leexannaa qaab sawireed oo ka sameysan sawirada, adoo adeegsanaya About3D, AutoDesk Recap oo aan daruurtiisa u dirno Civil3D. Waa hagaag, laylisyada soo socda ayaa lagu sameeyaa isla aaggan iyadoo la adeegsanayo ArcGIS Pro, oo leh fiidiyowyo sharraxaad badan leh. Xogta galinta, feylasha loo baahan yahay in la sameeyo layliga, iyo natiijooyinka soo saarista ee tijaabinta ayaa lagu daray dhammaan jimicsiyada.
Saamaynta isbedelka ArcMap ilaa ArcGIS Pro. Fasalkan, safar ArcGIS Pro, isdhexgalkiisa, ayaa la sameeyay, isagoo sharxaya isbeddelada ugu waaweyn, faa'iidooyinka, iyo saameynta nuqulkan marka loo barbar dhigo ArcMap. Qeyb kasta oo ka mid ah madaxa madaxa ayaa la sharraxay, halkee ayay ku yaalliin shaqooyinka ugu muhiimsan iyo awooddooda iyadoo loo marayo dib-u-habeynta uu lahaa ArcGIS Pro.
E1 jercicio. Alaabta laga keeno map-ka AutoCAD illaa GIS. Ka soo qaad faylka 'dwg' AutoCAD / Microstation, iskuna day inaad ka soo dejiso ArcGIS Pro; sharaxaya waxa la sameeyo marka nooca aan la taageerin. Waxyaabaha ay ka mid yihiin kala soocida walxaha lakabka ayaa la sharaxay, iyadoo la tirtirayo walxaha aan loo baahnayn sida dhidibada wadadaas oo aad u badan, u beddelashada fasallada muuqaalka iyo u beddelashada walxaha in ay noqdaan geesoolayaal laakiin waxay u yimaadeen sidii xariiqyo sidii ay ahayd polygons-ka dhismaha, kooxaynta khadadka waa inay ahaataa mid marka laga hadlayo dhidibka webiga ugu weyn, guryaha iyo harada. Iskusoo wada duuboo, sida walxahan 'CAD' ay u noqdaan lakabyo GIS.
Jimicsiga 2. Baabi'inta goobta laga soo galo GPS ee qaabka UTM. Shaqada laga soo dejiyo AutoCAD, iskudhafyo iskudhaf ah oo laga helo GPS oo ku jira qaab UTM ayaa loo keenay si loogu sameeyo burburin hanti. Layligu wuxuu ka kooban yahay hawlaha soo dejinta isku-duwayaasha la saadaaliyay ee foomka XY, iyaga oo u qoondeeya saadaasha WGS84, aag ka dibna u beddelaya geesaha khariidada. Kuwaas, ikhtiyaarka ah in la abuuro shirqool hoosaad, xakameyn deg deg ah si loo jaro gooynta, loo xisaabiyo wareegga iyo aagga labada mitir oo laba jibbaaran iyo sidoo kale beddelidda iyo keydinta khaanad kale sida hektar ayaa la adeegsadaa.
Jimicsiga 3. Nooc ka mid ah maaddooyinka adag ee la xisaabiyey. Layligani waa mid gaar ah. Waxay daaweyneysaa, sii wadida horumarinta hantida, waxaa lagu sharaxay sida loo sameeyo isku xirnaan badan oo isku dhafan, sida furaha 'cadastral key' oo ku saleysan bartamaha foomka 'P-coordinateX', iskuduwaha, dash ka dibna lambar.
Jimicsiga 4. Falanqaynta Bannaanka. Webiga ka gudba guryaha, xisaabinta aagga saamaynta ayaa lagu sameeyaa, iyadoo la adeegsanayo keyd ah oo 15 mitir u jira dhidibka webiga weyn iyo 7.5 mitir oo ku yaal wabiyada. Intaa waxaa sii dheer, waxaa la muujiyey sida loo sameeyo kala-baxa si hal geesoolayaal looga yeesho aagga saamaynta.
Jimicsiga 5. Calaamadaynta sifooyinka. Hadda, sii wadida shaqada leh guryaha, waxaa lagu sharaxay sida loo abuuro tibaaxyo loogu xiro xog kala duwan khadadka kala duwan ee jadwalka qaabka sumadaha. Xaaladdan oo kale, furaha cadastral-ka ee aan horay u sameysannay, iyo aagga lagu darayo A = qiimaha ka hor. Intaa waxaa sii dheer, waxay sharraxeysaa sida loo wareejiyo calaamadda, marka la eego magacyada faashashka webiga, iyo sidoo kale sida loo adeegsado saameyno gaar ah loona qaabeeyo qaabka qoraalka.
Jimicsiga 6. Tijaabinta sifooyinka. Qeybtaan koorsada waxay baraysaa sida, iyada oo ku saleysan xogta miiska, guryaha la qori karo, iyadoo la adeegsanayo shuruudaha iyo howlaha ArcGIS Pro. Shax Excel ayaa ku xiran halka ay mulkiilayaashu guryaha ku yaalliin, baarisna lagu sameeyay guryaha Waxay leeyihiin xaalad gaar ah, tusaale ahaan halka milkiilaha uu ku leeyahay magaca "Juan", halkaas oo uusan kaar aqoonsi lahayn ka dibna loo qoondeeyay iyadoo lagu saleynayo shuruudaha.
Jimicsiga 7. Tabaha digitizing Fasalkani wuxuu diiradda saarayaa dhinacyada abuurista iyo wax ka beddelka xogta goobaha. Xeeladaha digitation-ka waxaa lagu sharaxay sida in god laga sameeyo goob ka soo baxda lakabka, sida loo buuxiyo geesooleyaasha kanaalka adoo adeegsanaya is-dhammaystirka ama sida loo sawiro webiga agtiisa iyadoo la adeegsanayo aaladda raadraaca.
Jimicsiga 8. Sawirrada hirgelinta. Halkan, haysashada sawir kaas oo UTM iskuduwaha lagu yaqaan, juqraafi ayaa la sameeyaa. Si ka duwan layliga qaybtii hore, ayaa loo hagaajinayaa iyada oo lagu saleynayo iskudhafyada loo sameeyay sida xarafka X, Y. Waxaa jiri kara koorsooyin kale oo ArcGIS Pro ah.
Marka aad hesho Kooraska, waxaad u heli kartaa nolosha nolosha oo aad ku qaadato qiyaastaada inta jeer ee aad rabto.
Post Previous" Hore Wuxuu bilaabayaa talaabo adag oo ah 2019 World Geospatial Forum ee Amsterdam
Post Next Venezuela ka tag waqtiga waqtigoodaNext »